Fitondrana HVM : Tsy tsara toerana hiresaka demokrasia | Ny Valosoa Vaovao
Fitondrana HVM : Tsy tsara toerana hiresaka demokrasia
Nataon’ny fitondrana Hvm litania ny teny hoe demôkrasia hatramin’ny nandaniana ny volavolan-dalàm-pifidianana nataon’ireo ampahany amin’ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza, tamin’iny herinandro lasa iny. Tsy misy tsy niteny izany na ny Filohan’ny Repoblika ary indrindra fa ny Praiministra, ary mazava loatra hanaraka ambokony ireo mambra ny governemanta mbamin’ireo tomponandraikitra amin’ireo rantsa-mangaikan’ny andrimpanjakana rehetra. Nohindrahindraina mihitsy fa tena endriky ny demôkrasia iny niseho iny, hoy izy rehetra. Tena mandala ny demôkrasia tokoa ve ity fitondrana Hvm ity?
Marobe ny olon-tsotra, na fikambanana samihafa na ao anatin’ny antoko politika io na tsia, no te haneho hevitra ankalamanjana eto amin’ny firenena ny amin’ny fahitany ny zava-misy amin’ny fitantanam-pirenena. Ireo izay nangataka alalana, ary izay tokoa no tena ara-dalàna, tany amin’ny prefektiora anefa dia niala maina avokoa tao anatin’izao fitondrana izao. Eny, fa na dia ireo te hanao hetsika fotsiny tsy ara-poltika aza, toy ny tamin’ny nataon’ny antoko Tim saika hankalaza ny fetiny teny Mahamasina, fa narirarira sy nosakanana tsotra izao tamin’ny ora farany. Mandala ny demôkrasia ve amin’izany ity fitondrana Hvm ity?
Niaraha-nahita sy nandre ny nanaovana antsojay ny mety ho kandidà filoham-pirenena matanjaka hifaninana amin’ny kandidàm-panjakana, toy ny nahazo an-dRavalomanana Marc tany amin’ny faritra samihafa, Taolagnaro, Toliara, sns… Ny nisakanana an-dRajoelina sy ny ekipany tany Mahajanga taorian’ny fandehanany tany Ambilobe. Ny niafaràny azon’ity farany natao sisa dia nandeha nankany amin’ny fiangonana katolika iray izay nanamarika fotoan-dehibe ny farany teo.
Ho an’ny fitondrana Hvm, ny dradradrainy mandrakariva dia ny hoe efa misy ny antenimieram-pirenena io, dia ao no filazana sy famoahana ny hetahetam-bahoaka, fa tsy eny an-dalambe. Iaraha-mahita anefa fa tsy izany loatra intsony no ahafantaran’ny vahoaka azy io amin’izao fotoana izao. Araka izany, misy ny famehempehezana ny vahoaka tsy ho afaka hanambara malalaka ny heviny momba ny fitondrana sy ny fitantanam-pirenena ataony. Ary famitahana be ihany ny vahoaka ny fanerena azy hiantehitra amin’ny Antenimieram-pirenena na Antenimeran-doholona sy tsy hieritreritra ankoatra ireo.
Hiaraha-mahita na mandre ny fihetsiky ny vahoaka any amin’ireo firenena efa tena miaina ny demôkrasia. Vao tsy ela, ohatra ny tany Frantsa tamin’ny hetsiky ny sendikalista, izay firenena iondrehan’ny fitondrana Hvm fatratra tokoa sy tahafiny. Nahoana ny vahoaka any na antokon’olona no afaka midina an-dalambe maneho ny heviny, ary ny mpitarika sendikalista tsy enjehina sy potehina toy ny hita teto amintsika? Miharihary, fa tsy izao fitondrana Hvm izao velively no tsara toerana amin’ny firesahana ny fampanjakana ny demôkrasia eto amin’ny firenena raha tsy ohatra angaha misy fiovam-penitra mahery vaika ataony hanehoany izany. Ny ho avy no hanambara izay. Fa rehefa tsy hiova fa ny fomba fiasa hatramin’izay no atao dia aoka tsy hivolana izany.
Visites du jour: 36 803